Kungani i-FEELTEK - FEELTEK Laser Technology Co., Ltd.
Mayelana ne-Dynamic Focus System
I-2D Scanhead Serial
2.5 I-Scanhead Serial
Inani eliphakeme kakhulu lama-FE
I-3D Scanhead Serial
Ukucutshungulwa Kwensimu Enkulu
I-3D Surface Processing
Ukuphishekela ulwazi olunzulu ngomsebenzisi
Nikeza isiqiniseko sekhwalithi sawo wonke
100% Ukutholwa kokukhukhuleka kwezinga lokushisa
Inqubo egcwele yokuqapha izinga lokushisa lesikhathi sangempela
Okukhipha umbiko wedatha yangempela
Ngokuphindaphinda kaningi komshayeli nenzwa yemoto, i-FEELTEK inikeza ukunemba kokuma okuhle ukuze kuqinisekiswe ukucutshungulwa okunembayo kwendawo.
Ngokusebenzisa kahle umshayeli nenzwa yemoto, kanye ne-amplifier, senza ukucindezelwa kwe-drift kulawuleke.
Ukusebenza kokusheshisa nokulawula kwe-Overshoot
Ijubane lemoto kanye nokusebenza kokusheshisa kuyisiqinisekiso sokunemba kwekhona kanye nokudubula ngokweqile, lokhu futhi kuyindinganiso yokungena yokucubungula ngokunemba (ukugcwalisa isivinini esikhulu, i-etching.etc)
Qinisekisa isivinini esifanayo nokunemba kwe-XY.
Qinisekisa ukunemba kokugcwalisa kanye nokujikeleza okuncane kokucubungula.
Thuthukisa ipharamitha yokugcwaliswa kwengelosi kanye ne-dither yomugqa oqondile.
Ukulinganisa kwe-Axis ye-Z
Ngeplathifomu yokulinganisa inzwa yokunemba okuphezulu, i-FEELTEK yenza umugqa, ukulungiswa kanye nedatha yezinga lokushisa lokukhukhula imiphumela ye-eksisi eguqukayo ingabonakala.Ikhwalithi iqinisekisiwe.
●Ithagethi yokulinganisa: Ukunemba kwendawo, ukukhukhuleka kwezinga lokushisa kanye nomugqa we-eksisi engu-Z.
●Indlela yokulinganisa: isitholi sobubanzi obunembe kakhulu.
●Ithuluzi lokulinganisa: SICK (C30T05) .
●Izinkomba zamathuluzi okulinganisa: Ibanga: 30mm, Ukunemba: 0.3μm, Isikhawu sesampula: 12.5μs.
uhlu: 99. 5%@3°
izinga lokushisa lolwandle: ≤4 μm@4hours
ukulungiswa: ≤1.2 μm
Sethula ubuchwepheshe ezimbonini eziningi zokucubungula i-laser ye-3D, njengokumaka kwe-laser ye-3D, ukuqoshwa, ukushisela nge-laser, ukubhoboza, ukukhiqiza okungeziwe, ukwelashwa kwendawo kanye nezinye izinhlobo zezixazululo ze-laser processing.
I-3F-5F ye-Building I, Isikhungo Sokuthuthukiswa Kwesayensi Nobuchwepheshe, Indawo Yokuhweba Ekhululekile yase-Zhangjiagang, Idolobha lase-Suzhou, Isifundazwe sase-Jiangsu
© Copyright 20102021 : FEELTEK Laser Technology Co. Ltd. Wonke Amalungelo Agodliwe.